शैक्षिक तथा धार्मिक महोत्सवको अन्तिम दिन सम्ममा जम्मा १ करोड ६६ लाख रकम संकलन ! – ebaglung.com
२०७५ मंसिर २१, शुक्रबार २०:१०	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
महोत्सवका सबै कार्यक्रमहरु केहि समय पश्चात रात्रिकालीन सभामा समापन गरिने
लोकेन्द्र निरासी, बुर्तिवाङ २०७५ मंसिर २१ । बुर्तिबाङमा सञ्चालन भइरहेको बागलुङ ढोरपाटन शैक्षिक तथा धार्मिक महोत्सवको आज अन्तिम सातौं दिनमा मात्र ११ लाख ३१ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ दान सहयोग रकम उठेको छ । महोत्सवमा आज अन्तिम दिनको बेलुका साँझसम्म १ करोड ६६ लाख ६५ हजार बढी रकम संकलन भएको छ । महोत्सवका सबै कार्यक्रमहरु आजै रात्रिकालीन सभामा समापन गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
आजको दिवा कार्यक्रममा ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्ती मगरको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । प्रमुख अतिथि घर्तीले कार्यक्रममा बोल्दै निसीभुजी क्षेत्र र समग्र बागलुङ जिल्लाका शैक्षिक अवस्थालाई विकास गर्न सबै अगाडि बढुनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले यस क्षेत्रको शैक्षिक विकासको लागि आयोजना गरिएको बागलुङ ढोरपाटन शैक्षिक तथा धार्मिक महोत्सव निकै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै आयोजकलाई धन्यवाद दिए । उनले ताराखोला गाउँपालिकाको तर्फबाट ३ लाख २५ हजार सहयोगको घाषणा समेत गरे । त्यसैगरी आजको कार्यक्रमका सभानायक ८४ वर्षीय हस्ती खत्रीले रु. २ लाख २२ हजार २ सय २२ दान सहयोग गरिन् ।
अहिलेसम्म सबै भन्दा बढी दान सहयोग गर्नेमा क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चन्द्रलाल अर्याल दम्पतिव्दारा २५ लाख २५ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ दान सहयोग भएको छ । यस अघि ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली दम्पतिबाट २१ लाख ५ हजार अक्षयकोषको रुपमा घोषण गरिएको रकम पहिलो स्थानमा थियो । दान गर्नेहरुको अझै पनि महोत्सव सचिवालयमा लर्काे लागिरहेको छ । कार्यक्रमको अन्तिम समापनसम्म दान सहयोग रकम अझै बढ्ने देखिएको छ ।
महोत्सव मूल आयोजक समिति अहिले रात्रिकालीन कार्यक्रमसँगै समापन कार्यको तयारीमा जुटेको सचिवालयले जनाएको छ । महोत्सवको आज अन्तिम दिनको रात्रिकालीन समापन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रुपमा ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली रहने बताइएको छ ।